Location: Mbido » Ịdee » ndị mmadụ » Praịm Mịnịsta mba UK bụ Boris Johnson bụ onye ndu ụwa kacha ewu ewu
Ndị isi ụwa ndị ọzọ nọ na ala nke ndepụta ahụ bụ Onye isi ala France Emmanuel Macron, nwere ọkwa nnabata nke -25, yana Jair Bolsonaro nke Brazil, nwere -19.
E bipụtara nsonaazụ nyocha nke ụlọ ọrụ ọgụgụ isi data dabere na US, Morning Consult na Tọzdee, ogo Onye isi ala UK Boris Johnson nọ n'okpuru ndepụta ewu ewu nke ndị isi ụwa 13.
Ntuli aka ahụ ekpughere na Johnson bụ onye ndu ụwa kachasị ewu ewu ugbu a, onye nkwado netwọk ugbu a guzoro na -43, ebe naanị 26% ndị mmadụ na-akwado ndị nwere nsogbu. onye isi ala.
A họpụtara Prime Minista India Narendra Modi dị ka onye kacha ewu ewu site na ndị a gbara ajụjụ ọnụ, na-enweta ọkwa nkwado net nke 50.
Ntụle nha nha nha nke ntuli aka ahụ ruru ihe dịka 45,000 na US, ebe nha nlele sitere na 3,000 ruo 5,000 na mba ndị ọzọ.
Morning Consult nyochara echiche na ụfọdụ ọchịchị onye kwuo uche ya kacha emepe emepe. Ndị ọchịchị aka ike na ndị ọchịchị aka ike sitere na mba ndị na-abụghị ndị ọchịchị, dị ka nke Russia Vladimir Putin, Chinese Xi Jinping, North Korea Kim Jong-un, Turkmenistan's Gurbanguly Berdimuhamedow na Belorusia Alexander Lukashenko abụghị n'ọkwa.
onye isi ala Ogo nnabata Johnson gbagoro na elu n'oge mbụ UK Mkpọchi na 2020, mana ọ dara nke ukwuu n'ime izu ndị na-adịbeghị anya, na-esochi asịrị 'Partygate'.
E boro Boris Johnson ebubo imebi ihe mgbochi COVID-19 na-efe efe nke gọọmentị nyere ma na-eche oku ka ọ gbaa arụkwaghịm.
Ọ rịọla mgbaghara maka omume ya ma kpọkuo ọha na eze na ndị ọgbọ ya ka ha chere nchoputa nyocha nke ime ma ọ dara iwu n'ezie.
Ọzọ na: Boris Johnson
Ukraine sonyeere atụmatụ scream.travel ọhụrụ site na...